Izindaba - I-vaseline gauze nayo ibizwa nge-gauze kapharafini
I-vaseline gauze ibizwa nangokuthi i-gauze kapharafini
Indlela yokukhiqiza ye-Vaseline gauze ukucwilisa i-emulsion ye-Vaseline ngokuqondile nangokulinganayo ku-gauze, ukuze i-gauze ngayinye yezokwelapha ifakwe ngokugcwele ku-Vaseline, ukuze ibe manzi ngesikhathi sokusetshenziswa, ngeke kube khona ukunamathela kwesibili phakathi kwe-gauze kanye ne-gauze. uketshezi, ingasaphathwa ukucekela phansi isilonda uqweqwe, ukukhuthaza ukukhula granulation futhi ukhuthaze isilonda ukuphulukiswa.
Uvaseline wezokwelapha osetshenziswa inzalo usetshenziselwa ukuvimbela ukunamathela phakathi kwe-gauze nesilonda.Ingakwazi ukugcoba futhi ingabi nesilonda, ikhuthaze ukukhula kwe-granulation futhi ikhuthaze ukuphulukiswa kwesilonda.Ilungele kakhulu ukugqokwa kokushiswa kanye nokugqokwa kwesilonda esingatheleleki.
Ngaphambi kokusetshenziswa, hlanza futhi womise isilonda nesikhumba sendawo, futhi usebenzise ezinye izidakamizwa ukwelapha isilonda nendawo ethintekile;Ngesikhathi sokusetshenziswa, i-vaseline gauze inganameka esilondeni noma engxenyeni ethintekile, kodwa i-vaseline gauze ingeyezinto ezisetshenziswayo ezilahlwayo futhi iyenqaba ukusetshenziswa futhi;I-Gauze kaVaseline esetshenzisiwe kufanele igcinwe endaweni eyomile, engenawo umoya oshisayo futhi kude nomthombo womlilo.
Isikhathi sokuthumela: Nov-01-2021